Imbeko kunye neHuawei azizukuhlula | I-Androidsis
Imbeko ayizukuhlukanisa neHuawei
Ezi ntsuku zimbalwa zidlulileyo, imithombo yeendaba eyahlukeneyo e-China uxele ukuba iNhlonipho yayiza kwahlukana neHuawei kungekudala. Iindaba ezimangalisayo eziye zavelisa ukungaqiniseki okuninzi. Kuba ayisosigqibo ekungekho mntu kulindeleke ukuba usithathe. Ngesi sizathu, ekugqibeleni, inkampani kuye kwafuneka ijongane namahemuhemu akhulayo malunga noku.
Kwaye kuqinisekisiwe ukuba iNhlonipho ayizukuhlukana neHuawei. Ngamahemuhemu angenasiseko, ngokungathandabuzekiyo athe avelisa ulindelo olukhulu e-China, nakwi-Intanethi, kodwa ayizukwenzeka. Umongameli wenkampani yaseTshayina utshilo.
Imbeko yenziwa nje kwiminyaka emihlanu edlulileyo njengophawu olutsha lweHuawei. Ixesha elide ihleli iyinto yesibini ngaphakathi kwiqela, nangona phakathi kuka-2017 no-2018 sibona inkqubela phambili enkulu abanayo. Zombini zikumgangatho weefowuni zazo kunye nentengiso ephezulu.
Kwakhona, Imbeko iyanda ngokukhawuleza kwintengiso, kunye nokuvulwa kobuninzi beevenkile ezibonakalayo, ngakumbi eTshayina nakwezinye iimarike zaseAsia. Ke ngoko, lo mzuzu ulungileyo uthathwe ngabaninzi njengethuba lokwahlukana nenkampani yabazali.
Into engayi kwenzeka, njengoko uMongameli oHloniphekileyo ngokwakhe sele eqinisekisile. Ikamva lenkampani linxulunyaniswe nelo leHuawei, Kwisicwangciso-qhinga sehlabathi, ngenjongo yokugcina ezi ntengiso zimbini kwintengiso yehlabathi. Ke kujongeka ngathi siza kuba neefowuni kuzo zombini iimveliso ixesha elininzi.
Kuya kuba ngumdla ukubona ukuba isicwangciso-qhinga sabo siguquka njani kwihlabathi liphela, ngokungathi zombini ezi nkampani ziyaqhubeka nokufumana indawo, ezinye zeemodeli zazo ziya kuba ziintshaba enye kwenye. Ke kuyakufuneka ukubona Benza njani ukusombulula le nto kwiHuawei, Ukuze ezi ntlobo zimbini zikhule ngokuqhubekayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Huawei » Imbeko ayizukuhlukanisa neHuawei
IToyota kunye noGoogle bafikelela kwisivumelwano sokubonelela nge-Android Auto kwizithuthi zenkampani yaseJapan
Izipho eziphezulu zeBanggood-iveki kaSeptemba 24 ukuya ku-30, 2018